Nepal Auto | दसैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङः यी कुरामा ध्यान दिनुभएन भने पछुताउनुपर्नेछ
दसैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङः यी कुरामा ध्यान दिनुभएन भने पछुताउनुपर्नेछ 10 Ashwin, 2075
दसैंं आउँदैछ । बर्षदिनमा एक पटक आउने यो पर्वलाई हामी हर्षोल्लाससाथ मनाउने गर्छौं । यो एउटा वहाना पनि हो, आफन्त, इष्टमित्र, जहान–परिवार भेट्ने । भलाकुसारी गर्ने । त्यही भएर धेरैजसो आफ्नो कार्यथलो छाडेर गाउँघर पुग्छन् ।
दसैंको अवसर पारेर घर फर्कनेहरुको ठूलो लस्कर लाग्ने गर्छ । काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्र वा आफ्नो घरभन्दा बाहिर बसेर काम, उद्यम गर्नेहरुलाई यतिबेला घर फर्कने चटारो हुन्छ । काठमाडौंको कुरा त अझ फरक छ । यहाँ वसोवास गर्नेहरु धेरैजसो उपत्यका वाहिरका छन् । कोही पश्चिमका, कोही उत्तरका, कोही पूर्वका, कोही दक्षिणका । चारतिरबाट विभिन्न सिलसिलामा काठमाडौं थुप्रिएका छन् । उनीहरु दसैंैंको मेसो पारेर गाउँ फर्कने गर्छन् ।
यसरी दसैंंमा गाउँ फर्कनेहरु अत्याधिक हुने भएकाले लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात पाउन गाह्रो हुन्छ । गाडीमा अत्यधिक चाप हुन्छ । कतिसम्म भने, यसरी गाउँ फर्कनेको चाप गाडीले थेगि नसक्नु हुन्छ । अर्थात गाडीको क्षमताभन्दा बढी त यात्रु नै हुन्छन् ।
यसरी दसैंको छेकमा यात्रुको चाप हुने भएकाले सार्वजनिक यातायातका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिन्छ । महिनादिन अघि टिकट बुकिङ खुला गरिन्छ । लामो यात्रामा जानेहरुले यही समयमै टिकट खरिद गरेर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्छन् ।
यसपाली पनि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ । र, अहिले टिकट बिक्री भइरहेको छ । ढिलै भए पनि बुकिङ खुलेको छ ।
यद्यपि यतायात व्यवसायी भने केही समयदेखि असन्तुष्ट छन् । उनीहरु स्टेयरिङ छाडेर सडकमा समेत उत्रिए ।
आखिर जे भएपनि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएसँगै यात्रुहरुमा टिकट सुरक्षित गर्ने हतारो हुन्छ । तर, टिकट खरिद गर्नुअघि धेरै कुरामा बिचार गर्नुपर्छ । नभए अग्रिम टिकट बुकिङ गरेपनि पछि पछुताउनुपर्नेछ ।
किन पछुताउनुपर्नेछ ?
१. सम्बन्धित काउन्टरबाट मात्र टिकट खरिद गरिएन भने
चाडपर्वको बेला यात्रुको चाप बढी हुने हुँदा व्यवसायीहरुले मौकाको फाइदा उठाउन सक्छन् । तपाईंको हातमा कालोबजारीमार्फत टिकट पनि आइपुग्न सक्छ । यस्तो टिकटको भर नपर्नुहोस् । टिकट काउन्टरमा गएर सम्बन्धित गाडीकै टिकट लिनुहोस् । टिकट काउन्टरमा भाडादर पनि लेखिएको हुन्छ । आफु जाने गन्तव्यको भाडा कति उल्लेख छ, त्यती मात्र भाडा तिर्नुहोस् । अरु किसिमले प्रलोभनमा पारेर वा डर देखाएर बढी भाडा असुल्न खोज्यो भने प्रहरीमा खबर गर्नुहोस् । यदि तपाईंले जथाभावी स्थानबाट टिकट लिनुभयो, जथाभावी शुल्क तिर्नुभयो भने पछि पछुताउनुपर्नेछ ।
२. टिकटमा गाडी नम्बर, सिट र छुट्ने मिति यकिन गरिएन भने
तपाईंले हतारमा टिकट त काट्नुहुन्छ तर त्यो कुन यातायात कम्पनी हो, कुन गाडी हो भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । यदि ख्याल गरिएन भने पछि पछुताउनुपर्छ ।
गाडी कुन हो मात्र होइन, कति नम्बरको गाडी हो भनेर गाडी नम्बर पनि यकिन गर्नुपर्छ । कतिपयले टिकट त दिन्छन् तर त्यसमा गाडीको नम्बर उल्लेख हुँदैन । यसरी नम्बर बिनाको टिकट भएपछि आफुले सोचेको भन्दा अर्को गाडीमा पनि कोचिदिन सक्छन् । यातायात व्यवसायीले यस्तो चलाखी खुब गर्छन् ।
आफू कुन कम्पनीको, कति नम्बरको गाडीमा कुन सिटमा बसेर, कुन मितिमा जाने हो, त्यसबारे टिकटमै उल्लेख गराउन लगाउनुहोस् । गाडी कुन समयमा छुट्ने हो त्यसबारे पनि पक्का गर्नुहोस् । सबै कुरा पक्का गरेर मात्र टिकट लिनुहोस् । त्यसो भएपछि तपाईं ढुक्क भए हुन्छ ।
३. गाडीको कन्डिसनबारे जानकारी लिइएन भने
तपाईंले आफु कुन गाडीमा यात्रा गर्ने हो भन्ने कुरा पहिले उक्त गाडी हेरेर यकिन गर्नुपर्छ । गाडी नयाँ हो वा कन्डिसनको हो÷होइन, हेर्नुहोस् । टिकटमा नयाँ बसको फोटो देखाएर अर्को गाडीमा पनि चढाउन सक्छन् ।
आफू चढ्ने गाडी कस्तो हो, कुन अवस्थामा छ भनेर सोध्नुहोस् । सम्भव भएमा गाडी हेर्नुहोस् । आफू चढ्ने गाडीको कन्डिसनबारे ख्याल राख्नुहोस् । गाडी कति राम्रो छ, सिट कति आरामदायक छ भनेर पनि बुझ्नुहोस् ।
४. चालकको अवस्था बुझिएन भने
साथै लामो दुरीको यात्रा छ भने चालक कति जना छन् भनेर पनि सोध्नुहोस् । दसैंैंको बेला पैसा कमाउने चक्करमा एकै जना चालक रातदिन गाडी कुदाइरहेका हुन्छन् । निद्रा र थकानले गर्दा उनीहरुले गाडी दुर्घटनामा पार्न सक्छन् । कतिपय चालक मदिरा सेवन गरेर पनि गाडी चलाउँछन् । त्यसैले तपाईं लामो दुरीको यात्रा गर्नुहुन्छ भने गाडीमा कति चालक छन्, कस्तो छन् भनेर जानकारी लिनुहोस् । एउटै चालकले लामो समय र एकोहोरो गाडी कुदाइरह्यो भने दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ ।
केबुलकारको सफलता र सम्भावना
स्वर्गिय राजा वीरेन्द्र एक पटक चितवनको मनकामना केबुलकार निरीक्षणमा गएका थिए रे ।...
साझा बस भक्तपुर चल्ने भएपछि विरोध शुरु
काठमाडौं । साझा यातायातले भक्तपुरमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न लागेपछि स्थानीय साना...
यी हुन् २०१८ का बेस्ट कार : स्यान्ट्रोदेखि स्विफ्टसम